UberStudent vs. Edubuntu. Yeyiphi engcono kubafundi? | Ubunlog
UberStudent vs. Edubuntu. Ukukhangela eyona distro ibalaseleyo yabafundi
UPablo Aparicio | | Edubuntu
Akusiyo imfihlo ukuba kuninzi kunikezelo lweLinux. Ukubala kuphela Ubuntu kunye nazo zonke iincasa ezisemthethweni, sinee-10 ezikhoyo, kwaye loo nto ayizukubala zonke ezingaqhelekanga. Ndikhumbula iminyaka eliqela eyadlulayo xa ndafaka Ubuntu Studio njengenkqubo ephambili, ulwabiwo olwenzelwe iimvumi kunye nokwenza umxholo wemultimedia. Kwaye, nangona sele sifike kade «ukubuyela esikolweni», ingxelo esemthethweni iyafumaneka zabafundi. Kule nqaku siza kubeka le nguqulo esemthethweni yabafundi ubuso ngobuso nolunye uhambiso olusekwe ku-Ubuntu olunokuthetha ngoku malunga noku: Edubuntu vs.UberStudent.
Zombini ezi nkqubo Zisekwe kubuntu, ke bambalwa kakhulu umahluko ngaphakathi. Umahluko ukwiminye imiba enje ngeenkqubo ezifakiweyo, yonke into icwangciswe njani okanye umfanekiso. Kukho umahluko ekusebenzeni kwezi nkqubo zimbini, kodwa ayisiyonto siza kuyiphawula kakhulu ukuba ikhompyuter ayiyiyo ilaptop encinci.
1 Khuphela uze ufake
2 Iinkqubo ezifakiweyo
4 Umfanekiso kunye noyilo
Khuphela uze ufake
Zombini ezi zinto zihanjiswayo zifakela ngendlela elula nefanayo. Kufuneka nje Khuphela i-ISO yenye yeenguqulelo (ukusuka LAPHA Edubuntu kunye nokusuka LAPHA UberStudent's), yenza ufakelo lwependrive (kucetyisiwe) okanye uyitshise kwi-DVD-R, qala iPC apho sifuna ukuyifaka ngeDVD / iPendrive ebekwe kwaye faka inkqubo njengoko besinokwenza ngolunye uhlobo loBuntu. Ngokubanzi, nayiphi na ikhompyuter ifunda iCD kuqala kwaye emva koko idiski enzima, ke ukuba ukhetho lwethu kukusebenzisa ipendrive, kuya kufuneka sitshintshe i-boot order kwi-BIOS. Kuzo zombini iimeko sinokuvavanya inkqubo okanye ukuyifaka.
Zombini ezi zinto zihanjiswayo zinenani elifanelekileyo leenkqubo zemfundo ezifakwe ngokungagqibekanga. Xa sikhuphela imifanekiso yediski, malunga ne-3GB yazo zombini ii-ISOs sele isenza sicinge ukuba asikulandanga unikezelo olulula. Ukuba sikhangela phakathi kwezicelo zemfundo kwezi nkqubo zombini, siyakubona oko U-Edubuntu uneenkqubo ezininzi ezifakwe kwangaphambili ngaphezu kweUberStudent. Ngapha koko, i-UberStudent isixhuma kwezinye iiwebhusayithi ngokungathi ziinkqubo. Ndikhetha ukuba iinkqubo, imfundo kule meko, ifakwe ngokungagqibekanga, kodwa ndiyaqonda ukuba ayizukucinga sonke ngokufanayo. Ngapha koko, nabani na ongavumelaniyo nam kwaye ngolunye usuku washiyeka ngaphandle konxibelelwano oluvumela ukuba badibane nolwazi, baya kundixelela.
Kubalulekile ukukhankanya ezinye iinkqubo u-Edubuntu angenazo i-UberStudent, ezinje nge-KAlgebra, Kazium, KGeography okanye iMarble. Endaweni yoko, i-UberStudent ineqoqo elincinci, kodwa ibandakanya izixhobo zokuhlela izicatshulwa uEdubuntu angenazo. Okokugqibela, i-Edubuntu ibandakanya iinkqubo ezininzi ezibonelela kakhulu ulwazi kubafundi kwaye UberStudent ibandakanya ngaphezulu izixhobo ezinokunceda ekufundeni, kodwa ngaphandle kokubonelela ngolu lwazi. Ndicinga ukuba u-Edubuntu ulunge ngakumbi kubafundi bezenzululwazi kunye nezibalo kwaye i-UberStudent ijolise ngakumbi kubasebenzisi abakhetha izicatshulwa, ngakumbi ukuzibhala.
Zonke izicelo, ngokufanelekileyo, kufuneka zihlelwe ngandlela-thile. Kulilize ukuba nezicelo ezininzi ukuba asikwazi ukuzifumana (njengoko kwenzekile kum xa ndisebenzise inguqulelo yeLinux Mint). Kubasebenzisi abatsha, ukuphuma kweWindows ukungena kwiLinux kunokuba yinto edidayo, ngakumbi ngenxa yokungawazi amagama ezicelo (njengoko kwenzekile kubantakwethu xa bathatha iikhompyuter zam).
Ngale ndlela, ubunye ayikuko ukuba inezicelo ezifihliweyo, kodwa yindlela yokubabonisa kuyo UberStudent yindalo ngakumbi kwaye inomdla, njengoko ubona kwicandelo elingaphambili. Kubunye kunokuba nzima ngakumbi ukufumana usetyenziso oluhlelwe ngokwamacandelo ngokubanzi. Yile nto kanye eyenzekileyo kum okokuqala ndiyisebenzisa: Bendingazi ukuba mandijonge phi. Ayenzekanga kum kwezinye iindawo ezibonisa imizobo. Ngamafutshane, ayisiyiyo eyokuba ibonise ukuba ibhetele kakhulu kunenye; kukuba enye iyibonisa kancinci.
Umfanekiso kunye noyilo
UberStudent isebenzisa imeko-bume Xface, Ukuyivumela ukuba isebenze bhetele kwiikhompyuter ezingenamandla, kodwa oku kuza ngexabiso esiza kuhlawula ngalo ngomfanekiso onomtsalane. Into ebicacile kwiinguqulelo ezidlulileyo yayikukunciphisa, ukuvala kunye nokubuyisela amaqhosha. Zazinemibala eyahlukeneyo kwaye zazingabonakali zintle. Kodwa, njengoko ubona kwisikrini sangaphambili, le yinto etshintshileyo kuhlobo lokugqibela kwaye kuphela liqhosha lokuvala iifestile ezibomvu ezisele.
Kubonakala kubalulekile ukukhankanya ukuba kwiSeshoni ebukhoma i-UberStudent ayinalo ulwimi lwesiSpanish. Kuya kufuneka uyifake.
Kwelinye icala, u-Edubuntu ugcina imeko-bume ubunye ngokupheleleyo esebenzisa uhlobo olusemthethweni lwe-Ubuntu. Ubunye, obugxekwe kakhulu ngabasebenzisi abaninzi (kubandakanya nam) okoko yafika kuqala ku-Ubuntu 11.04, inokuziva ingaqhelekanga xa siqala ukuyisebenzisa, kodwa inomdla ngakumbi kunayo nayiphi na imeko, kubandakanya iGnome (enye endihlala ndisebenzisa, ngakumbi Ubuntu Mate). Eyona ngxaki iphambili kubumbano kukuba isebenza kancinci kwiikhompyuter ezinesixhobo esisezantsi, kodwa ibonakala inomdla kakhulu.
Amanqaku, U-Edubuntu uphumelele ngo-2-1. Kwaye ayisiyonto emele ukusothusa, ayilolize xa sithetha ngayo a incasa esemthethweni Ubuntu ngokuchasene nokuzimela. Nje ukuba siqhelane nokusebenzisa le nkqubo, ubunye buhle kakhulu kuneXface kwaye zonke izicelo ezikhoyo e-Edubuntu zisenza ukuba siyinike ibhanti eliyintshatsheli ngokwalo.
Ngayiphi na imeko, ekubeni ziziinkqubo zasimahla kwaye kulula ukuzifaka, kungcono ukuba uzame zombini iinkqubo ukubona ukuba zeziphi ezizezona zilungele iimfuno zakho. Ukuba unayo, yeyiphi kwezi distros zimbini oyithanda kakhulu ukuyifunda: UberStudent okanye Edubuntu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Edubuntu » UberStudent vs. Edubuntu. Ukukhangela eyona distro ibalaseleyo yabafundi
Ndiza kujonga kwi-Uberstudent, ndinelaptop enokuqhuba u-Edubuntu kodwa andicingi ukuba kufanelekile ukuncama ukusebenza ukuze kujongwe idesktop (ubuncinci ngokwembono yabo, wonke umntu uya kuba nokhetho lwakhe ).
Kwiminyaka ethile edlulileyo eArgentina urhulumente wasungula i-distro esekwe kwi-Debian, i-Huayra Linux, ejolise kwicandelo lezemfundo, kodwa kwinguqulelo yamva nje (3.0 ukuya phambili) yathatha ithuba apho yayijolise khona kwinkalo ebonakalayo, ukulayisha idesktop encinci izinto eziyimfuneko kunye nokuthoba ukusebenza kwenkqubo kwizixhobo ezisebenza kancinci, into engakhange yenzeke kuhlelo lwe-2.0.
Inyani yile yokuba ihlazo, izise izixhobo ezilungileyo kakhulu, kunye ne-CDpedia (apho ubunokukhutshelwa khona kwi-wikipedia kwi-hard drive), isidingo sokudityaniswa kwi-intanethi besele sincitshisiwe kakhulu.
Enye into enokubakho kukusebenzisa ezi zinto zisasazwayo zeLinux ngaphandle kokuzikhuphela. Ungayenza kwi-Intanethi kumaphepha ewebhu:
Uyisebenzisa kanjani iThunar ngokungagqibekanga ku-Ubuntu